झापाका विद्यार्थीलाई पल्मोनरी हाइपर्टेन्सनसम्बन्धी अभिमूखीकरण - BirtaJyoti
झापाका विद्यार्थीलाई पल्मोनरी हाइपर्टेन्सनसम्बन्धी अभिमूखीकरण
adminJanuary 28, 2018 12:00 am 0
बिर्तामोड । मोरङको उर्लाबारीमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको पल्मोनरी हाइपर्टेन्सन एसोसिएसन नेपालले आइतबार बिर्तामोडमा अभिमूखीकरण तथा चेतनामूलक कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।
मारवाडी युवा मञ्च बिर्तामोडको संयोजनमा एसोसिएसनले झापाका विभिन्न विद्यालयका विद्यार्थीलाई कार्यक्रममा सहभागी गराएर सचेतना प्रदान गरेको हो ।
अग्रसेन भवनमा आयोजित कार्यक्रममा मेची प्राविधिक प्रतिष्ठान, कन्चनजंघा इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्स, मदन भण्डारी मेमोरियल एकाडेमी, एमिटी एजुकेशन, न्यूटन्स एजुकेशन, बालमिकी एजुकेशन, देवी मावि, कन्काई एजुकेशन र लिटल फ्लावर्स गरी ९ वटा विद्यालयका दुई सयभन्दा बढी विद्यार्थीको सहभागिता थियो ।
उनीहरुलाई अमेरिकाबाट डा. चुडामणि खनालले अनलाइनमार्फत् प्रत्यक्ष रुपमा सचेतना प्रदान गरेका थिए । त्यस्तै डा. सीपी यादवले मुटु तथा फोक्सोका बारेमा सचेतना प्रदान गरेको कार्यक्रममा भारतको सिलिगुडीका डाक्टर अरुणदाती दास गुप्ताले थाइराइड र मधुमेह तथा जयदिप दे ले न्यूरो र मृगिसम्बन्धी सचेतना प्रदान गरेका थिए ।
कार्यक्रममा पल्मोनरी हाइपर्टेन्सन, यसका लक्षण, जोखिम तथा उपचारबारे सचेतना प्रदान गरिएको लायन्स क्लब अफ बिर्तामोडका उपाध्यक्ष गौरीशंकर गुप्ताले जानकारी दिए ।
सम्झना खनालको अध्यक्षता तथा बिर्तामोड नगरपालिकाका मेयर ध्रुवकुमार शिवाकोटीको प्रमुख आतिथ्यमा भएको कार्यक्रममा स्वागत विनोद पोखरेलले गरेका थिए । कार्यक्रमको सञ्चालन उर्मिला दाहालले गरेकी थिइन् । कार्यक्रमको सम्पूर्ण व्यवस्थापन संस्थाकी महासचिब निलम अग्रवालले गरेकी थिइन् ।
के हो पल्मोनरी हाइपर्टेन्सन् ?
फोक्सोमा उच्च रक्तचाप हुने अवस्थालाई पल्मोनरी हाइपर्टेन्सन वा पल्मोनरी आर्टेरीय हाइपर्टेन्सन भनिन्छ । यो प्राणघातक दीर्घरोग हो । समयमा यसको उपचार नभएमा मुटुले काम नगर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
– सास फेर्न कठिन हुने
– चक्कर लाग्ने (रिँगटा लाग्ने)
– बेहोस हुने (मुर्छा पर्ने)
– पेट, हात पाखुरा, खुट्टा, गोलीगाँठा सुन्निने
– औँलाहरु सेतो वा निलो देखिने र दुख्ने
भद्रपुरमा शौचालय अनुगमन गरिने
भद्रपुर । खुला दिसामुक्त नगरपालिका घोषणा गर्नुपर्ने ४० दिन मात्र बाँकी रहँदा भद्रपुर नगरपालिकाले शौचालयको अवस्था बारे अनुगमनलाई तीव्रता दिने भएको छ । एक साताअघि ... Read More
Tirtha Sigdel- August 11, 2018
धूलोले जनजीवन प्रभावित भएको गुनासो
भद्रपुर । दक्षिणी झापाका बासिन्दाले निर्माणाधीन सडकहरुमा उड्ने धूलोले जनजीवनलाई निकै प्रभावित पारिरहेको गुनासो गरेका छन् । झापाको भद्रपुर नगरपालिका क्षेत्रलगायत भद्रपुरले जोड्ने छाएका हलाकी ... Read More
NEWER POSTइलाममा दश वटा झोलुंगे पुल निर्माण हुँदै
OLDER POSTवाणिज्य संघ बिर्तामोडको साधारणसभा